ISilo sixwayisa uZuma ngolwaseMangaung | IOL Isolezwe
ISilo sixwayisa uZuma ngolwaseMangaung
Isolezwe / 11 December 2012, 12:26pm /
240908 ANC president Jacob Zuma (left) speaks to Zulu King Goodwill Zwelithini during a Heritage Day event at KwaDukuza yesterday. Zuma expressed regret that several cabinet ministers had resigned this week
ISILO samabandla sidonse uMengameli Jacob Zuma ngendlebe ekutheni kumele aqinisekise ukuthi kuba nokuthula engqungqutheleni ye-ANC eqala ngesonto elizayo eMangaung futhi kumele amukele noma ngabe iyiphi imiphumela yokhetho.
Lokhu kwenzeke emhlanganweni weSilo samaBandla noZuma obusesigodlweni eNyokeni KwaNongoma ngeSonto ebusuku.
Kulo mhlangano uZuma ubezocela izinhlanhla futhi ezobikela noHlanga loMhlabathi ngohambo lwakhe lokuya eMangaung lapho i-ANC izobe ikhetha khona ubuholi futhi kucaciswa ukuthi ngabe uyalithatha yini ihlandla lesibili.
“Engifisa kwenzeke wukuthi njengomuntu ongumholi kuyomele wamukele noma ngabe hlobo luni lwemiphumela futhi uyithathe njengoba injalo ngoba lokho kuyobe kungasho ukuthi usungumuntu nje kodwa uyobe usaqhubeka nokuba ngumholi wabantu,” kusho iSilo.
Sekujwayelekile ukuthi uZuma ahambele iSilo uma kuzoba nemihlangano emikhulu yokukhetha ubuholi kwi-ANC njengoba nangesikhathi sengqungquthela yasePolokwane ngo 2007 wahambela esigodlweni kwaKhangelamankengane nalapho afakwa khona esibayeni ecelelwa izinhlanhla emadlozini esizwe samaZulu.
Ngaphandle kwalokho uZuma ubuye wabikela iSilo samabandla mayelana nokuphuthunyiswa kukaDkt Nelson Mandela esibhedlela.
ISilo sibe sesifisela uMadiba ukwelulama okuphuthumayo ukuze aphume esibhedlela ngoba isizwe sisamdinga futhi nabantu bemthanda.
Kwenzeka lokhu nje uZuma kuthe emasontweni edlule wahlaba emzini wakhe eNkandla ecela emadlozini.
UZuma uphinde wathembisa ISilo ukuthi uma ebuya eMangaung uzobuya azosibikela ngokwenzekile kanti uzophinde abe yingxenye yomthandazo omkhulu ozoba ngoDisemba 27 wokukhulekela isizwe nokuthelelana amanzi.
Kule ngqungquthela yaseMangaung uZuma uyimfivilithi njengoba enezifundazwe eziyisithupha ezimesekayo bese kuthi imbangi yakhe uMnuz Kgalema Motlanthe ongakaphumeli obala unezifundazwe ezintathu kuphela ne-ANCYL abamfuna kwesobuMengameli.
UZuma yena usekwa yi-ANCWL ne-ANC Veterans League nokuyinto ethathwa ngokuthi imbeka emathubeni okuthi alunqobe ukhetho.
Okunye okuvelayo ukuthi selokhu anqoba ukhetho ePolokwane uZuma ehlula uMbeki uhlale eqinisekisa ukuthi ngesikhathi esithile uyabuya azobikela Isilo mayelana negxathu aselihambile ngokwemisebenzi yeqembu nekahulumeni ekutheni kuthuthuke isizwe.